ICabin encinci iRetreat kuMlambo kunye neSauna - I-Airbnb
ICabin encinci iRetreat kuMlambo kunye neSauna
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKathryn
Le khabhinethi encinci ye-rustic ifanelekile kwiholide yothando okanye iholide. Ifumaneka kwi-2.5 yeehektare ezinamaplanga kuMlambo iNyoka, ungonwabela i-500 yeenyawo zonxweme lomlambo. Ehlotyeni uchithe ixesha lakho uqubha, uloba kwaye uphumle kumlilo wangaphandle, ngelixa ekwindla nasebusika upholile kufuphi nesitovu somlilo wenkuni kwikhabhinethi okanye uphumle kwi-sauna yomlilo weenkuni.
Le ndlwana ilungile 550 square feet of space. Ngelixa ilala abantu aba-4 phakathi kwegumbi lokulala eliphezulu kunye neebhedi zesofa yendawo yokuhlala, iyonwaba kakhulu ngabo bakhululekileyo omnye komnye. Izibini okanye iintsapho ezincinci zicetyisiwe.
4.97 · Izimvo eziyi-105
Lo mhlaba unemithi ukhethekile ekufikeleleni emfuleni okufihlakeleyo, indawo enemithi kunye nokuba kufutshane nehlathi leSithili saseChengwatana xa uhamba uhambo lwemini, ukutyibilika ekhephini, okanye ukukhwela ikhephu. Ikwakwimizuzu eli-10 ukusuka kumbindi wedolophu yasePine apho unokundwendwela iibhari, iivenkile zokutyela, iivenkile ezithengisa ukutya, iivenkile ezithengisa ukutya kunye nevenkile ethengisa utywala yasekhaya.
Uya kuba nemfihlo enkulu ngexesha lakho kwikhabhathi njengoko ndilawula le ndawo isuka eMinneapolis. Uya kuba nakho ukufikelela kwikhabhathi ngebhokisi etshixwayo kwaye ndiyaqinisekisa ukuba yonke into icociwe, igciniwe kwaye ilungele ukuba uzinze ixesha elide lokuhlala kwakho. Ndiya kufumaneka ngefowuni, umbhalo kunye ne-imeyile ukuba kukho naziphi na iingxaki okanye izinto ezimangalisayo.
Uya kuba nemfihlo enkulu ngexesha lakho kwikhabhathi njengoko ndilawula le ndawo isuka eMinneapolis. Uya kuba nakho ukufikelela kwikhabhathi ngebhokisi etshixwayo kwaye ndiyaqinise…